Jiangsu KingRay Composite Material Co., Ltd. kuyinto umenzi ngobuchule PTFE amabhanti ekuhlanganiseni / Teflon ingenamthungo, Teflon Laminator Release Ilaphu / Teflon fiberglass ngelaphu, Teflon fiberglass ilaphu yokuncamathelisa, Teflon fiberglass mesh ibhanti, Teflon eziko linner, Teflon microwave wokomisa ibhanti, Teflon ubushushu uphawu ibhanti, Teflon Separater Release Belt, abicah yerabha ilaphu. Izixhobo ophezulu kunye technologies.
Siye kudlule ISO9001 kunye Germany DQS uqinisekiso kurhwebo ofanayo zasekhaya. Ukususela ekusekweni, siye ukubambelela oomoya lweshishini we "zobungcali, Technicalization, Scale, Abantu Okokuqala, kunye Innovation."
Siye saseka ubudlelwane bexesha elide kunye nabanye abenzi odumileyo zomatshini kokubini apha ekhaya nakumazwe aphesheya, ezifana Veit GmbH, Hashima, Oshima, Summit, kunye neenkampani KDK. iimveliso zethu kakhulu kumazwe angaphandle ukuya kumazwe angaphezu kwama-20 kunye nemimandla, yaye baye baphumelela abathengi 'intembeko nokudumisa.
Siqinisekile ukuba iimveliso zethu umgangatho ophezulu kunye neenkonzo ezigqwesileyo ziya kutsala uxabiso ngakumbi nangakumbi abathengi '. Ukuxhumana nathi ke linyathelo lokuqala ukwakha ulwalamano ishishini ngempumelelo kunye nathi. Ukuba unomdla kuyo nayiphi na imveliso yethu, nceda uzive ukhululekile tyelela iwebsite yethu okanye qhagamshelana nathi ngqo ukuze ufumane inkcazelo engakumbi. Sijonge phambili Ngokubambisana kwixa elizayo.